Cryptocurrencies, Robotyada ganacsiga ... miyaad su'aalo qabtaa?
Baadhitaano badan kadib, tijaabooyin badan oo guuleystey oo aan guuleysan, waxaan helney xalal qaar si loo soo saaro guulaha aan tooska aheyn.
Aan kuwada sheekaysanno Telegram
Digniino iyo wararkii ugu dambeeyay
Markhaatiyada iyo Dib u eegista Google
Ma u baahan tahay caawimaad iyo talo ku saabsan ganacsiga bots iyo / ama cryptocurrencies?
Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo tallaabooyinka isku xirka aaladahaaga ganacsiga? Ma dooneysaa inaad gasho adduunyada lacagaha loo yaqaan 'Crypto currencies', Bitcoin, Ethereum iyo altcoyinno kale?
Weydii dhammaan su'aalahaaga Telegram.
Robot ku saleysan qiimaha dahabka
Robotyo la heli karo xagaagan 2021
saliidda / Forex